ဥရောပမှာ ဆငျးရဲသားတှေ တိုးလာနတေယျလို့ ETUC ဆို - SANTHITSA
ဥရောပကုနျသှယျရေး သမဂ်ဂ ကှနျဖယျဒရေးရှငျး ETUC ရဲ့ လလေ့ာ တိုငျးတာမှု တှအေရ ဝငျငှနေညျးတဲ့ မိသားစုတှေ က အားလပျရကျ ခရီးရှညျ ထှကျဖို့ ကို လုံးဝမတတျနိုငျတဲ့အပွငျ သူတို့ရဲ့မပွညျ့စုံမှုတှကေ နှဈစဉျ နှဈတိုငျး တိုးတကျနပေါတယျလို့ သိရပါတယျ။
ဝငျငှနေညျးတဲ့မိသားစု တဈဝကျကြျောက လုံးဝကို ခရီးမထှကျ နိုငျတော့ပါဘူး။ ပွီးခဲ့တဲ့ ၁၀ စုနှဈက ဝငျငှနေညျးတဲ့ မိသားစုတှမှော ခရီးရှညျမထှကျနိုငျတာ ၂၈% ပဲရှိပါတယျ။ အရအေတှကျအားဖွငျ့ ၃၅ သနျးရှိပါတယျ။
မနှဈက ပွုလုပျတဲ့ စဈတမျးအရ ၆၀% သော ဝငျငှနေညျးမိသားစုတှေ ခရီးရှညျမထှကျနိုငျတော့ပါဘူး။ ပွောခငျြတာက ၁၀ စုနှဈတဈခုအတှငျးမှာ ဥရောပ မှာရှိတဲ့ ဆငျးရဲသား ၂ ဆ တိုးလာတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အနိမျ့ဆုံးလခ သကျမှတျခကျြက စံနှုနျးမပွညျ့မီတဲ့အတှကျ ဝငျငှနေညျး မိသားစုတှရေဲ့ လူနမှေု အဆငျ့ အတနျးက ကဆြငျးလာပါတယျ။ ဝငျငှနေညျးပွီး ဆငျးရဲမှုတာရှညျနတေဲ့ လူဦးရတှေကေ စပိနျ ( ၄.၇သနျး ) ၊ ဂြာမဏီ ( ၄.၃) ၊ွ့ပငျသဈ ( ၃. ၆သနျး) နဲ့ ပိုလနျ ( ၃.၄ သနျး) ရှိပါတယျ။
အီတလီမှာ ၇သနျးကြျောရှိပါတယျ ။အီတလီက ဥရောပမှာ အမြားဆုံးပါပဲ။ အဲ့ဒိအရအေတှကျက အပိုငှမေဖွုနျးနိုငျတဲ့ လူဦးရေ စာရငျးဖွဈပါတယျ။
ဥရပေ မှာ လုံးလုံးဆငျရဲတဲ့ လူတှေ အမြားဆုံးရှိတာက ဂရိနိုငျငံဖွဈပါတယျ။ရိုမနေီးယား ၊ ခရိုအေးရှား ၊ဆိုကျပရကျနဲ့ စလိုဗကျကီးယား တို့က အစဉျလိုကျ ဆငျးရဲသားမြား တဲ့နိုငျငံတှဖွေဈပါတယျ။“ ဥရောပမှာ အနိမျ့ဆုံး လစာသကျမှတျခကျြက ဆငျးရဲသားတှနေဲ့ ဝငျငှနေိမျ့ မိသားစုတှကေို ဆငျးရဲတှငျးက ဆှဲထုတျနိုငျဖို့ ခိုငျမာမှုရှိဖို့လိုနပေါပွီ။
အဲ့လိုမှ မဟုတျရငျ ဥရောပ စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုး မှုက စိုးရိမျစရာ ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ” လို့ ETUC ရဲ့ ပွောခှငျ့ရပုဂ်ဂိုလျက ဆိုပါတယျ။
အဓိက ပွဿနာတဈခုက ဥရောပနိုငျငံအခြို့မှာ ဘုံသဘောတူထားတဲ့ အနိမျ့ဆုံးလုပျအားခကို ဈေးကစား နတောပဲဖွဈပါတယ။ျ ၁နာရီကို ၁၃ ယူရို သကျမှတျထားပမေဲ့ ဒိနျးမတျလို နိုငျငံမြိုးမှာ ၁နာရီ ၂၇ ယူရိုရနေ ခြိနျမှာ စလိုဗကျကီးယားလို နိုငျငံမြိုးမှာ ၁နာရီ ၅ ယူရို ပဲရပါ တယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ ဥရောပ က တဖွညျးဖွညျး ဆငျးရဲသားတှေ မြားမြား လာပါတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
REF: Euronews,Photo:,Credit bob edme
ဥရောပမှာ ဆင်းရဲသားတွေ တိုးလာနေတယ်လို့ ETUC ဆို
ဥရောပကုန်သွယ်ရေး သမဂ္ဂ ကွန်ဖယ်ဒရေးရှင်း ETUC ရဲ့ လေ့လာ တိုင်းတာမှု တွေအရ ဝင်ငွေနည်းတဲ့ မိသားစုတွေ က အားလပ်ရက် ခရီးရှည် ထွက်ဖို့ ကို လုံးဝမတတ်နိုင်တဲ့အပြင် သူတို့ရဲ့မပြည့်စုံမှုတွေက နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း တိုးတက်နေပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဝင်ငွေနည်းတဲ့မိသားစု တစ်ဝက်ကျော်က လုံးဝကို ခရီးမထွက် နိုင်တော့ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀ စုနှစ်က ဝင်ငွေနည်းတဲ့ မိသားစုတွေမှာ ခရီးရှည်မထွက်နိုင်တာ ၂၈% ပဲရှိပါတယ်။ အရေအတွက်အားဖြင့် ၃၅ သန်းရှိပါတယ်။
မနှစ်က ပြုလုပ်တဲ့ စစ်တမ်းအရ ၆၀% သော ဝင်ငွေနည်းမိသားစုတွေ ခရီးရှည်မထွက်နိုင်တော့ပါဘူး။ ပြောချင်တာက ၁၀ စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းမှာ ဥရောပ မှာရှိတဲ့ ဆင်းရဲသား ၂ ဆ တိုးလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အနိမ့်ဆုံးလခ သက်မှတ်ချက်က စံနှုန်းမပြည့်မီတဲ့အတွက် ဝင်ငွေနည်း မိသားစုတွေရဲ့ လူနေမှု အဆင့် အတန်းက ကျဆင်းလာပါတယ်။ ဝင်ငွေနည်းပြီး ဆင်းရဲမှုတာရှည်နေတဲ့ လူဦးရေတွေက စပိန် ( ၄.၇သန်း ) ၊ ဂျာမဏီ ( ၄.၃) ၊ြ့ပင်သစ် ( ၃. ၆သန်း) နဲ့ ပိုလန် ( ၃.၄ သန်း) ရှိပါတယ်။ အီတလီမှာ ၇သန်းကျော်ရှိပါတယ် ။
အီတလီက ဥရောပမှာ အများဆုံးပါပဲ။ အဲ့ဒိအရေအတွက်က အပိုငွေမဖြုန်းနိုင်တဲ့ လူဦးရေ စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥရေပ မှာ လုံးလုံးဆင်ရဲတဲ့ လူတွေ အများဆုံးရှိတာက ဂရိနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ရိုမေနီးယား ၊ ခရိုအေးရှား ၊ဆိုက်ပရက်နဲ့ စလိုဗက်ကီးယား တို့က အစဉ်လိုက် ဆင်းရဲသားများ တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။
“ ဥရောပမှာ အနိမ့်ဆုံး လစာသက်မှတ်ချက်က ဆင်းရဲသားတွေနဲ့ ဝင်ငွေနိမ့် မိသားစုတွေကို ဆင်းရဲတွင်းက ဆွဲထုတ်နိုင်ဖို့ ခိုင်မာမှုရှိဖို့လိုနေပါပြီ။
အဲ့လိုမှ မဟုတ်ရင် ဥရောပ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး မှုက စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်” လို့ ETUC ရဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က ဆိုပါတယ်။အဓိက ပြဿနာတစ်ခုက ဥရောပနိုင်ငံအချို့မှာ ဘုံသဘောတူထားတဲ့ အနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခကို ဈေးကစား နေတာပဲဖြစ်ပါတယ။် ၁နာရီကို ၁၃ ယူရို သက်မှတ်ထားပေမဲ့ ဒိန်းမတ်လို နိုင်ငံမျိုးမှာ ၁နာရီ ၂၇ ယူရိုရနေ ချိန်မှာ စလိုဗက်ကီးယားလို နိုင်ငံမျိုးမှာ ၁နာရီ ၅ ယူရို ပဲရပါ တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဥရောပ က တဖြည်းဖြည်း ဆင်းရဲသားတွေ များများ လာပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။